Jimma goota ishee mana hidhaa akkasitti simatte – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJimma goota ishee mana hidhaa akkasitti simatte
Ilaalaa! Akka waan hiriirri gaafa Sambataatti waamame Tigroota haleeluuf xiyyeeffateetti dhaamsa walii dabarsaa jiru rogeeyyiin jaraa gariin. Barruun kun akkas jedha.
“Tigroonni Tigraayiin ala jirtan gaafa Sambataa guyyaa 16/2010 of eeggannoo gochuu hin dagatinaa. Yoo xiqqaate qabeenyaa socho’u qabdanii fi maallaqa keessan bakka amansiisaa kaayyadhaa.
Sochiin guyyaa sanatti gootan of eeggannoon kan guutame haa tahu!”
Hammeenya makkalaakayaa har’a Jimmatti mul’ate duubaan kan jiru Ajajaa waraanaa dhalataa Tigraay Mahaarii jedhamu akka tahe irra gahameera. Namni kun guyyoota muraasa duras dhalattoota sablammii Dawroos dantaan gowwomsuun Oromoo irratti kan kakaasaa turee dha. Har’as dhalattoonni sablammii maqaa dhahame kanaa hoggansa Tigrticha kanaan akka Qeerroo irratti duulte irra gahameera.
Kaayyoon tarkaanfii sheexanummaa kun akka Oromoon dheekkamee sablammoota biroo isa keessa jiraatan irratti duuluufi. Har’a tarkaanfii hammeenyaa fudhatame kana booda ummanni Jimmaa magaalaa fi baadiyyaa irraa wal tumsanii gumaa bahachuuf waamicha walii godhuun mul’atee jira. Hammeenya kana mohachuuf tarkaanfiin humnaa akka hin barbaachifnee fi Polsiii Oromiyaa waliin tahuun yakkamtoota seeratti dhiheessuun adabuun akka barbaachisu wal hubachiifamee jira. Ummanni keenya karaa waraabeyyiin guyyaa ittiin nu nyaachuuf karoorfatte lagatee karaa jarri hin beekneen jaruma nyaatee dhabamsiisuu filachuun barbaachisaa dha
Wanti har’a Jimmatti tahe hojii hammeenyaa fi farra jijjiiramaa waraabeyyiin guyyaa itti jiraniif ragaa guddaa dha. Akkuma yaadatamu guyyoota muraasa dura Jimma keessatti dhalattoonni sabalammii Daawroo tokko tokko Qeerroo waliin walitti bu’uuf ergamanii turan. Rakkoo sana Qeerroon Jimmaa gara bal’inaa fi bilchinaan irra aanani. Polsii Oromiyaa waliin tahuun ergamtoota san qabanii toyanna jala oolchan.
Hara’ ammoo Qeerroo fi ummanni kumoota kudhanootatti tilmaamu Stadium Jimmaatti argamuun gootota hidhaa irraa hiiakaman simatan. Simannaa kana irratti abbootiin taaytaa sadarkaa godinaa fi magaalaalee argamanii jiru. Sagantaa seerawaa ture. Mirqaanni sagantaa kana irratti mul’ate ammoo warra garaa gube qaba. Dhuma sagantichaa irratti Qeerroon Aggaaroo irraa dhufan Izuzu yaabbatanii gara irraa dhufanitti osoo deemaa jiranii Makkalaakayaan kaampii Miraab Iz irraa dhukaasa itti bane. Warra madaawe bakkaa fuuchuuf wayta Qeerroon kaan birmatan dhalattoonni Dawroo waraana Wayyaaneef bitaman bahanii Qeerroo dhukaasni itti baname reeban. Kana malees Polisa Oromiyaa yoo arrabsan dhagahamee jira.
Wanni mul’ataa jiru ifatti hiriirri ummataa fi hiriirri waraana Wayyaanee adda adda tahuu agarsiisee jira. Sablammoota tokko qabatani kaanirratti duulchisuunis hojii Wayyaanee tahuu tarkaanfiin har’a waraanni Wayyaanee fudhate kun ragaa cululuqaa tahee fudhatamuu danda’a.
Haleellaan Makkalaakayaan Qeerroo Jimmaa gootota hidhaa irraa hiikaman saimatanii Aggaarootti galaa turan irratti fudhate shiro guyyoota muraasa dura magaalattii keessatti waraabeyyiin guyyaa dhalattoota saba bioo fi Oromoo walitti buusuuf raawataniin wal qabata jedhameera. Akka maddeen achirraa ibsanitti Makkalaakayaan tarkaanfii kana Qeerroo irratti kan fudhate ergamtoota sabaa fi sablammii keessaa kaadhimatan waliin tahuunii. Jalqaba Makaalakaayan dhukaasa banteen joollee madeessite. Warra madaawe bakkaa fuudhuuf yeroo Qeerroon kaan sosso’u dhalattoonni sablammii Kibbaa waraana Wayyaanee waliin tahanii Qeerroo tuman jedhu jiraattonni ijaan argan. Suuraan
kun Qeerroo madaahe keessaa kan tokkooti.